Muummichi ministeeraa Abiy Ahimed daawwannaa isaanii Awrooppaa har’a biyya Ferensaay Paarisi-tti eegalan.
Guyyaa borii Jarman Barlin bakka biyyoonni Afriikaa 11 irratti hirmaatanii fi wal ga’ii investmentii Afriikaatti fuuleffate irratti argamuun haasaa dhageessisuuf jiru. Chaansilerittii Jarmanii Angela Merkel waliin illee mari’achuuf jiru.
Itti dabaluu dhaan abbootii qabeenyaa Itiyoophiyaa keessatti hojjetaa jiranii fi karoora hojjechuu qaban waliinis wal arganii mari’atu jedhanii kan eegan ta’uu qindeessitoonni beeksisaniiru.
Roobii jechuun onkoloolessa 31 bara 2018 immoo stadiyeemii magaalaa Frankfert lammiiwwan Itiyoophiyaa fi hidda dhalata Iriyoophiyaa arguuf beellammi qabameera.
Ministriin dhimma alaa Itiyoophiyaa daawannaa kana kan qindeesse keessaa tokko. Waajjira ministrichaaf dubbi himaa kan ta’an obbo Melles Alem qopheen Awrooppaa kan Ameerikaatti aanaa jedhu.
Obbo Melles akka jedhanitti torbanneen hanga tokko dura kabajamoo muummichi ministeerichaa gara Afriikaa kaabaatti imaluu dhaan “ededa haa diigna, rigicha haa ijaarra” yaada jedhuun kan jalqabame sochiin lammiiwwan Itiyoophiyaatu jira.
Lammiiwwan Itiyoophiyaas jibba manna jaalala, wala shakkuu manna wal amanuu dhaan biyyi deebitee akka dandammattu gochuuf carraa waliin hojjechuu kan banuu dha.
Qophee guddaa lammiiwwan Itiyoophiyaa gidduutti tokkummaa uume ture. Kanatti aansuu dhaan waggoota hedduuf biyya isaaniittii fagaatanii biyya ormaa keessa kan turan hoogganoonni siyaasaa utuu wal hin argin turan, artistoota, namoota beekamoon gara biyya isaaniitti deebi’aa jiru.
Boqonnaan inni lammataa immoo “tokko taanee haa kaanu, borii keenya haa ijaarru” yaada jedhuun kan geggeessqmu yoo ta’u, guutuu Awrooppaa irraa kan walitti dhufan yoo ta’u tilmaamaan lammiiwwan Itiyoophiyaa kuma 20-25 ta’an Frankfert keessatti wal ga’ii geggeessamu irratti kan hirmaatan yoo ta’u lammiiwwan bakka garaagaraa jiran karaa sabaa himaalee adda addaa hordofu jedhamee eegama. Sabaa himaaleen biyyoota Awrooppaa adda addaa irraa dhufani illee kallattii dhaan sagantaa jiru tamsaasu jedhamee eegama jedhan.
Rakkoo Nageenyaa Beenishaangul Gumuzi
Waa’ee Ajjeechaa Gaazzessicha Saawudii Qulqulleeffachuuf Qornnaan Itti Fufee Jira
Nama Shakkamee Jedhan Angawoonni Amerikaa Qabanii Jiru